maitiro ekusetazve kamera mukati windows 10
Windows Kamera (inozivikanwa seKamera) ndeimwe yemapurogiramu ekupedzisira anotumira nawo Windows 10. Iyo yeKamera app, kunyangwe isiri seye-yakasarudzika-seyechitatu-bato maapplication, inotsigira yepamusoro-soro vhidhiyo kurekodha uye kutora mifananidzo.
Kana, panguva ipi neipi nenguva, iyo yeKamera app inotadza kurekodha vhidhiyo kana kutora mafoto, unogona nyore kugadzirisa iyo app nekumisazve. Mazhinji ezvinowanzoitika nyaya zvinogadziriswa paunogadzirisa iyo yeKamera app.
Kana nyaya ikapfuurira kunyangwe mushure mekumisazve iyo yeKamera app, unogona kuenda kumberi uye kudzorera iyo yeKamera app. Kuisazve iyo yeKamera app iri nyore. Iwe unongoda kusunungura iyo yeKamera app uye wozoisa kopi nyowani kubva Windows Chengeta.
Muchirongwa ichi, tichaona maitiro ekusetazve uye kudzoreredza iyo yeKamera app mu Windows 10.
INOKOSHA: Kana iwe uchinetseka nekamera paPC yako, tinokurudzira kuti uvandudze mutyairi wedhijitari kana kudzorera mutyairi usati waedza kumisazve kana kudzoreredza iyo yeKamera app. Kana iyo yakavakirwa-mukati kamera isiri kushanda, tarisa kana iwe uine akaremadza kamera mukati Windows 10.
Kudzoreredza iyo App yeKamera
Kuti udzorezve, tarisa kunongedzo muMethod 2 yakapihwa pazasi.
Step 1: Vhura purogiramu yeMapirogiramu. Enda kune Apps > Zvirongwa & maficha.
Step 2: Tarisa iyo yeKamera app yekupinda uye tinya pane imwechete kuti uisarudze. Iwe unofanirwa kuona ikozvino Zvinyorwa zvitsvaga kubatana.
Step 3: Click Zvinyorwa zvitsvaga batanidzo yekuvhura Kuchengetedzwa kwekushandisa uye app reset peji
Step 4: Pakupedzisira, chengetedza itangezve bhatani. Paunoona yekusimbisa kubhururuka, tinya iyo itangezve bhatani kumisazve iyo yeKamera app
Iwe unogona ikozvino kuvhura iyo Kamera app.
Kuisazve iyo yeKamera app
Dzorerazve iyo Kamera app chete kana nyaya ikapfuurira kunyangwe mushure mekumisazve iyo yeKamera app.
Kusiyana nemamwe mapurogiramu ekushomeka, App yeKamera haigone kubviswa kuburikidza neiyo App yezvirongwa. Tinofanira kushandisa iyo Windows PowerShell kana CCleaner kusunungura iyo yeKamera app uye wozoisa nyowani kopi yakafanana kubva Windows Chitoro. Heano maitiro ekuita izvo chaizvo.
Step 1: manya Windows PowerShell semutungamiriri. Kuti uite kudaro, kurudyi pane Bhokisi Rokutanga pane bharina rebasa uye ipapo tora Windows PowerShell (Admin) sarudzo. Neimwe nzira, Type PowerShell muKutanga / taskbar yekutsvaga munda, tinya-kurudyi Windows PowerShell kupinda uye tinya Mhanya semutungamiri kuita.
Step 2: Pahwindo rePowerShell, teedzera uye unama unotevera kuraira. Dhinda Enter Enter kiyi kuti uite iwo murairo.
Step 3: Zvino, tsvaga MicrosoftWindowskamera kupinda. Sarudza iyo PackageFullName yeKamera app uye shandisa Ctrl + C hotkey kuikopa kubhodhibhodhi.
Step 4: Dzokorora unotevera kuraira kuti uninstall iyo Camera app.
Murairo iri pamusoro apa, shandura PackageFullName nePackage chaiyoFullName yawakanyora muchiito chekutanga.
Iwe unogona kuvhura window yeWashShell ikozvino.
Neimwe nzira, iwe unogona kushandisa inozivikanwa CCleaner kusunungura default Windows 10 maapp. Vhura CCleaner, tinya Zvishandiso uye tinya maApp. Kungofa-kanda paKamera app wobva wadzvanya Uninstall kuita. Dzvanya OK bhatani paunoona yekusimbisa dialog.
Step 5: Pakupedzisira, vhura iyo App Store, tsvaga Windows Camera app uye wozoisa zvakafanana.
Tarisira iwe unowana mutungamiri uyu anobatsira!